Ukusika i-Laser yeKhaphethi yeenqwelomoya kwishishini lokubhabha - iGoldenaser
Umbono weLaser Cutting Machine
Flatbed CO2 Laser Ukucanda Matshini
Umatshini we-CO2 weGalvo
Umatshini wokusika we-Laser die-Cutting
Imibhobho yokungenisa umoya eyolukiweyo
Ileyibhile, ukuBambelela, iTape ebonakalayo,
Ikhaphethi kunye neMat
Nylon, iPolyamide (PA)
Ifilimu yokuDlulisa ebonakalayo
Iteyiphu ye-3M VHB
Malunga neGolden Laser (PDF)
Ukusikwa kweLaser kweKhaphethi yeAplani yeShishini lokuHamba
Itekhnoloji yeLaser isetyenziswa ngokubanzi kubuchwephesha bezobuchwephesha kunye ne-aerospace, njengokucheba i-laser kunye nokugrumba iinxalenye zejet, i-laser welding, i-laser cladding kunye ne-3D laser cutting. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zoomatshini be-laser kule nkqubo, umzekelo, amandla aphezulu e-CO2 laser kunye nefayibha laser ngezinto ezahlukeneyo. I-Goldenlaser inikezela isisombululo sokusika i-laser esilungiselelwe ikhaphethi yeenqwelo moya.
Indlela yokusika yemveli yekhaphethi yokubhabha kukusika ngoomatshini. Ineengxaki ezinkulu kakhulu. Umda wokusika ulihlwempu kakhulu kwaye kulula ukuwohloka. Ukulandelwa kukwafuna ukusika ngesandla kwaye emva koko uthunge umda, kwaye inkqubo yokuqhubekeka emva kokusebenza inzima.
Ukongeza, ikhaphethi yokuhamba ngenqanawa inde kakhulu. Ukusika i-Laser yeyona ndlela ilula yokusika ikhaphethi yeenqwelo moya ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo. I-Laser itywina umphetho weengubo zeenqwelomoya ngokuzenzekelayo, akukho mfuneko yokuthunga emva koko, ekwaziyo ukusika ubungakanani obude kakhulu ngokuchaneka okuphezulu, ukugcina umsebenzi kunye nokuguquguquka okuphezulu kwizivumelwano ezincinci neziphakathi.
Izixhobo zeKhaphethi eziSebenzayo zilungele ukusika kweLaser
Nylon, Non-ephothiweyo, ezinepolypropylene, ipholiyesta, ilaphu ezixutywe, EVA, Isikhumba, njl
Ukubaluleka okubalulekileyo kweLaser Cutting ye-Aviation Blanket
Ukutywina umphetho wekhaphethi ngokuzenzekelayo, akukho sidingo sokuthunga kwakhona.
Itheyibhile swa phambili izinto ukusika itheyibhile ngokuzenzekelayo, akukho mfuneko ungenelelo ngesandla ngexesha ukusika, ukonga iindleko zabasebenzi.
Ukuchaneka okuphezulu okuphezulu kwiipateni ezinde kakhulu.
Izicelo ezinxulumene noko
Izicelo ezinxulumene neekhaphethi ezifanelekileyo ukusika nokumakisha kwe-laser
Indawo yeerugs, Ikhaphethi yangaphakathi, Ikhaphethi yangaphandle, iDoormat, iMat Mat, iCarlpet Inlaying, iYoga Mat, iMat yoLwandle, iikhaphethi zeenqwelo moya, umgangatho wekhaphethi, ilaphu lekhaphethi, ikhava yenqwelomoya, iEVA Mat, njl.
Ingcebiso yoMatshini weLaser
X-Long Table Laser Cutting Matshini
Umzekelo No .: CJG-2101100LD
Ububanzi betafile yokusika ziimitha ezi-2.1, kwaye ubude beetafile bungaphezulu kweemitha ezili-11 ubude. Ngetafile ye-X-Long, ungasika iipateni ezinde kakhulu ngokudubula, akukho sidingo sokusika isiqingatha seepateni emva koko uqhubekeke nezinye izinto. Ngenxa yoko, akukho sithuba sokuthunga kwisiqwenga sobugcisa esenziwe ngulo matshini. Uyilo lwetheyibhile ye-X-Long yenza izinto ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo ngexesha elincinci lokondla.
Iinkcukacha ezithe kratya zemveliso
Umbono Laser mgawuli
Umatshini wokusika weLaser oPhezulu
Digital Laser Die mgawuli
Laser CO2 mgawuli omncinci
Isishwankathelo soomatshini be-laser be-CO2
Izinto zeLaser eziSebenzayo
map-marker Goldenlaser Industrial Park, Tianxing Road, Chuanlong Avenue, Isithili Huangpi, Wuhan, Hubei, China
Copyright © 2005-2022 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. Onke Amalungelo Agciniwe.